Waa tan jawaabitii la yaabka lahayd ee uu De Bruyne ka bixiyey su’aashii ahayd bal in uu aaminsanyahay in Pogba habaarkiisii ku soo laabtay isaga! – Gool FM
Waa tan jawaabitii la yaabka lahayd ee uu De Bruyne ka bixiyey su’aashii ahayd bal in uu aaminsanyahay in Pogba habaarkiisii ku soo laabtay isaga!
Kaafi December 5, 2017
(Manchester) 05 Dis 2017. Laacibka khadka dhexe ee Manchester City Kevin De Bruyne waxa uu bixiyey jawaab cajiib ah mar la weydiiyey bal in uu dareemay in Paul Pogba saddexda kulan ee la ganaaxay ay tahay wixii uu la jeclaa ciyaaryahanada City oo isaga ku soo laabtay.
Pogba waxaa dhaawac si weyn loogu eedeeyey hadalado uu jeediyey oo ahaa in uu rajeynayo in xiddigaha City dhaawacyo ku dhawacaan toddobaadyada soo socda.
Maanta ayaa su’aashaas wax laga weydiiyey De Bruyne waliba in uu dareemay in Pogba uu helay wixii uu u qalmay marka laga eego waxyaabihii uu u rajeynayey Belgium-ka iyo saaxiibadisia City.
Hase ahaatee, laacibkii hore ee Chelsea waxa uu bixiyey jawaab la yaab leh.
“Taas ma aaminsani. Waxaan ahay qof aan leex leexan. Haddii uu qof aaminsan yahay in WAXYABAHA DADKA KU SOO LAABTAN waa caadi. Qof walba xaq ayuu u leeyahay aragtidiisa. Ma rabo in qof dhaawacmo. Waa tartan, waxaad dooneysaa in aad ka horimaado kuwa ugu wacan.”
GOOGOOSKA: Olympiakos Piraeus vs Juventus 0-2 (Juve oo soo baxday)
GOOGOOSKA: Manchester United vs CSKA Moscow 2-1